Delfi v. Estônia: Fampandraisana Andraikitra Ny Vohikala Web Amin’ireo Fanehoankevitry ny Mpampiasa Aterineto, Mety Hanakenda ny Fahalalahana Maneho Hevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2019 6:18 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy tamin'ny Jona 2014)
Fanehoankevitra an'arivony maro no mipoitra isanandro eo amin'ireo vohikala mpilaza vaovao. Fanadihadiana iray vaovao avy amin'ny Fikambanana erantany an'ireo gazety sy ireo Trano Fanontàna no mampiseho fa, amin'ireo media 104 avy amin'ireo firenena 63, fito monja no tsy mamela ny fanehoankevitra avy amin'ireo mpamaky.
Mitàna andraikitra lehibe ao anaty adihevitra mikasika an'ireo olana ho amin'ny tombontsoam-bahoaka ny faritra fanehoankevitra eny anatin'ireo Vohikala : mahatonga ireo media an-tambajotra ho lasa toerana mavitrika hiaraha-miasa amin'ny fifanakalozan-kevitra izy ireo, fa tsy miasa fotsiny ho vovonana hitaterana ny vaovao. Vato fehizoro ho an'ny kolontsaina aterineto, ireo faritra natao ho fanehoan-kevitra dia maneho fahasamihafàna ifotony eo amin'ireo media mahazatra sy ireo media an-tambajotra. Noho ireo faritra natao ho fanehoana hevitra, tsy zotra tokana intsony ny fitobak'ireo vaovao ao amin'ny media an-tambajotra – izy ireo no fanalahidin'ny fampiharana ny fahalalahana maneho hevitra ho an'ny rehetra.
“‘Antson'ny andraikitra” an'ny XKCD (CC BY-NC 2.5)
Vokatry ny andraikitra mavesa-danja izay lalaovin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa ao anatin'ny fanakorianana malalaka ny vaovao, nirotsahan‘ny Media Legal Defence Initiative, miaraka miasa amin'ireo fikambanana media 23 erantany, ilay tranga niadian-kevitra be momba ny Delfi v. Estonia teo anatrehan'ny Fitsaràna Eoropeana mikasika ny Zon'olombelona, nangatahana tamin'ny fitsaràna mba hanaja ny fotokevitra hoe tsy tokony ho ireo media an-tambajotra no hanara-maso isanandro ireo fanehoankevitra an'arivony apetrak'ireo mpamaky eo amin'ny vohikalan'izy ireo. Nalefa teo anoloan'ny Efitrano Lehiben'ny Fitsaràna Eoropeana ny raharaha taorian'ilay didy teo aloha navoakan'ny Fitsaràna ambaratonga voalohany tamin'ny Oktobra 2013, izay nandidy fa ny vohikala Web estoniana Delfi no tomponandraikitra mikasika ny fanalàmbaraka navoakan'ireo mpampiasa azy, na dia efa namafa ireny fanehoankevitra ireny aza ireo mpitantana raha vantany vao voarain'izy ireo ny filazàna ny fisiana endrika fanalàmbaraka tao anatiny.
Tao anatin'ilay fanelanelanana, notsipihinay ny maha-zava-dehibe an'ireo faritra fanehoankevitra eny anaty vohikala Web ary nangatahanay ny Fitsaràna Eoropeana mba handinika ireo rafitra ara-pitsaràna miorina amin'ireo foto-dalàna eoropeana sy amerikana manafaka an'ireo media amin'ny adidy fanarahamaso ny vohikalan-dry zareo raha sanatria misy fanehoankevitra fanalàmbaraka, sahala amin'ny Ampahany faha-230 mikasika ny US Communications Decency Act. Asehon'ny famintinana ihany koa ireo fanao ho ‘famehezan-tena (autorégulation)’ nataon'ireo media mba handrindràna ireo fanehoankevitra ny fanehoankevitra tahaka izany sy hangatahana amin'ny Fitsaràna mba handray anaty kajikajiny ireo fomba tsara ireo.
Ny didy navoakan'ny Efitra Lehibe ao amin'ny Fitsaràna Eoropeana dia hisy fiantraikany henjana, tsy amin'ireo media an-tambajotra irery ihany, fa ihany koa mitatra ho an'ireo vohikala Web hafa sy ireo blaogy manolotra faritra ho fanehoana hevitra. Ny 9 jolay no fotoam-pitsaràna. Ho re alohan'ny faran'ity taona 2014 ity ny didim-pitsaràna.
Vakio ny fanelanelanana an'ny Media Legal Defence Initiative eto.
Zokiolona Mpanolotsaina momba ny Lalàna i Nani Jansen ary Mpanolotsaina momba ny Lalàna miaraka amin'ny Media Legal Defence Initiative kosa i Nani Jansen.